Noocyada Caadiyan loo Adeegsado ee Daabacaadda Warqada | Abuurista khadka tooska ah
Encarni Arcoya | 28/06/2021 10:01 | La cusbooneysiiyay 28/06/2021 10:04 | Khayraadka
Haddii aan wax kaa weydiinnay waxyaabo kala duwan noocyada warqadda daabacaadda, Waxa ugu macquulsan ayaa ah in waxa ugu horeeya ee maskaxda ku soo dhacayaa ay yihiin waraaqda aad ku daabacato guriga, taas oo ah, A4 qiyaastii ah 80 garaam, taas oo ah mid caadi ah. Si kastaba ha noqotee, dhexdhexaadinta garaafka waxaa jira noocyo badan oo kuxiran waxa aad rabto inaad daabacdo, laga bilaabo kan ugu khafiifsan, kuwa qaro weyn, iyo sidoo kale noocyo kale.
Weligaa ma isweydiisay noocyada waraaqaha jira? Oo sidee loo kala saaray? Marka xigta waxaan ka wada hadli doonnaa waxaas oo dhan si aad ugu dhowaato mowduucan.
2 Noocyada warqadda daabacaadda: waxyaabaha lagama maarmaanka ah
2.1 Miisaanka warqadda
2.2 Dareenka warqadda
3 Noocyada waraaqda daabacaada
3.1 Warqad dahaadhan
3.2 Warqad Couché
3.3 Warqad calaamadeysan
3.5 Warqadda deegaanka
3.6 Warqad aan caadi ahayn
3.7 Warqadda dib loo warshadeeyay
3.8 Warqadda is-dhejinta
3.9 Warqad hal abuur leh
3.10 Warqad deyn ah
3.11 Waraaqda Bristol
Waraaqdu waa cunsur oo ay sameeyeen fiilooyin khudradeed oo isku dhafan. Nidaamku wuxuu ka kooban yahay joojinta fiilooyinka ku jira biyaha si ay u soo baxaan markay qalalaan.
Waxay kuxirantahay alaabada ceyriinka ah ee la isticmaalay, dhamaadka, culeyska, dalabka ... noocyo kala duwan oo waraaq ah ayaa la heli karaa. Hadda, marka laga hadlayo noocyada warqadda daabacaadda, waa in la sheegaa inay aad uga duwan yihiin isticmaalka kale.
Noocyada warqadda daabacaadda: waxyaabaha lagama maarmaanka ah
Kahor intaadan kahadlin waraaqaha daabacaadda ee kaladuwan ee jira, waxaa muhiim ah inaad taqaano laba waji oo midba midka kale ka garto: culeyska, cadka iyo dhamaadka warqada.
Tani waa culeyska mitir laba jibbaaran ee warqadda, wax gebi ahaanba ka duwan culeyska warqadda. Waa xulasho aad muhiim u ah maxaa yeelay haddii aad ku daabacato miisaan aan sax ahayn, saameynta ugu dambeysa ee mashruucaaga waa la burburin karaa. Sidaa darteed, waxay kuxirantahay waxaad rabto inaad daabacdo, waxaad heli doontaa naxwayaal kala duwan:
40 illaa 60 garaam: oo ay adeegsadaan wargeysyada.
Laga soo bilaabo 80 illaa 100 garaam: waa midka aad ku isticmaasho xafiis, guri, iwm. Waa tan ugu caansan uguna caansan.
90 illaa 170: waxaa badanaa loo isticmaalaa buug-yare iyo / ama boodhadh.
200-250 gr: waxay caan ku yihiin joornaalada ama xaashida.
Laga soo bilaabo 250 ilaa 350 gr: waxaad 'ku dareemi doontaa' kaararka ganacsiga ama kaararka boostada. Waxay u adkeysi badan tahay foorarsiga
350-450 gr: waxaan kahadleynaa kartoon, oo loo isticmaalo daboolida buugaagta iyo wixii lamid ah.
Qaamuusku wuxuu loola jeedaa dareenka warqaddaas. Tusaale ahaan, warqaddu waxay noqon kartaa mid qallafsan, ama hadhuudh aan dhab ahayn, MAYA (oo macnaheedu yahay qabow baa la riixay), ama HP (kulul la cadaadiyay).
Iyada oo ku saleysan qaabka, waxaad ka heli kartaa noocyo kala duwan sida:
Warqad dahaadhan: oo ay adeegsadaan joornaalada, buug-yaraha, iwm.
Warqad qalaad: waa mida aad u isticmaasho si joogto ah, guriga iyo xafiiska labadaba. Sidoo kale waxay ku jirtaa buugaagta, buugaagta xusuusta, iwm.
Laid: waa waraaq adag laakiin si siman.
Kraft: bunni, waxaad arki doontaa faahfaahinta fiber-ka.
Newsprint: sidoo kale loo yaqaan joornaal cusub, waa warqad saxan saxafadeed.
Hadiyad ahaan: 'dhabta' wuxuu leeyahay culeys dhan 100 garaam iyo dhalaal dhalaalaya.
Finish waxaa loola jeedaa sida warqaddu u egtahay. Badanaa waxay ku saleysan tahay ogaanshaha haddii dhammadku dhalaalayo (dhalaalaya) ama maya (jaalka). Mid kasta waxaa loo adeegsadaa adeegsiyo kala duwan. Tusaale ahaan, dhammaystirka matte waxaa loo isticmaalaa buugaagta bogagga gudaha; halka dhaldhalaalka inta badan loo adeegsado wejiga hore iyo gadaashiisa dambe si midabadu u soo baxaan.
Haatan, waxaan kaala hadlaynaa noocyada warqadda daabacaadda. Si kastaba ha noqotee, inaan kuu sheego dhammaan xulashooyinka aad haysato ayaa kugu dheeraan doona. Sababtaas awgeed, waxaan diiradda saari doonnaa kuwa ugu caansan uguna caansan ee aan wax yar kaaga sheegi doono mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Waxay leedahay dhammaystir hufan oo dhalaalaya, in kasta oo ay sidoo kale noqon karto matte Ma mid baa Waxaa loo doortaa joornaalada, kaararka ganacsiga, buug-yare-yaasha, iyo mashruuc kasta oo muuqaal ah taasi waxay ubaahantahay natiijo midab wanaagsan.
Waxaa lagu gartaa inuu xoogaa yar yahay, taas oo macnaheedu yahay in khadku uusan aad ugu soo galin warqadda, iyo midab ayaa ka soo baxa dusha sare. Maxay taasi qabataa? Hagaag, ka dhig mid aad u xiiso badan.
Waxaad kuheli kartaa dhalaalaya iyo cows.
Xaaladdan oo kale waxaynu ka hadlaynaa warqad lagu garto gargaar dusha sare ah. Tusaalooyinka doorkan ayaa ah la dhigey, la shubay ama maché.
Warqaddan, oo lagu heli karo 125 iyo 225 garaam, waxay leedahay dhammaystir siman oo siman, oo tayo sare leh maxaa yeelay caddaankeedu aad buu u nadiifsan yahay wuxuuna midabbada ka dhigayaa mid hagaagsan (xitaa muujinta iyaga).
Waa midda ka timaadda FSC keyn sharciyeysan.
Warqad aan caadi ahayn
Ma yahay mid ka mid ah kuwa ugu caan ku ah dabeecad xumadooda sare, taas oo ka dhigaysa inay si fiican u nuugayso khadadka. Waxay leedahay dhaldhalaalaan dhalaalaya oo jilicsan (tan ugu dambeysa ee ku habboon in lagu akhriyo qoraallada waaweyn).
Waxa kaliya ee xun ayaa ah in midabada, marka ay nuugayso khadku, ay u muuqdaan xoogaa daciif ah.
Warqadda dib loo warshadeeyay
Midkani wuxuu leeyahay naxwaha xaddidan, maadaama uu ka socdo 60 illaa 100 garaam. Dib loo warshadeeyay, midabkeedu badanaa maaha cadaan, laakiin wuu aamusanyahay, in kasta oo ay isticmaali karaan walxo ay ku caddeeyaan.
Si ka duwan noocyada kale ee warqadda wax lagu daabaco, midkani waxaa lagu gartaa isagoo leh hal dhinac oo leh xabagta xabagta. Sidaa darteed, waxaa lagu daabacaa kaliya hal dhinac oo u adeegaa, kana saaraysaa warqadda difaaca mid kale, si loogu dhajiyo dusha sare.
Warqad hal abuur leh
Waa nooc ka mid ah waraaqaha miisaanka iyo qaabab kala duwan leh, iyo weliba dhumucda. Waxay diiradda saaraysaa mashaariicda xalinta sare, kuwaas oo doonaya inay ku gudbiyaan dareenka naqshadahooda. Sidaa darteed, waa wax iska caadi ah in lagu arko casuumaadaha, kaararka ganacsiga, xaashiyaha, waraaqaha ...
Warqad deyn ah
Waraaqdani waxay leedahay miisaan caadi ah oo hooseeya, oo ah caddaan saafi ah, laakiin sidoo kale waxaa jira midabbo. Guryo badan doorkaan waa wax caadi ah in lagu yeesho guriga.
Waraaqdan waxaa si fiican loogu yaqaannaa "warqadda kaararka". Waa warqad xoogaa ka adag warqad, badanaa midab leh, laakiin aad u caam ah, maadaama ay u saamaxayso inay foorarto, jarto, iwm.
Sidaad arki karto, waxaa jira noocyo badan oo warqad daabacan ah. Talada ugu fiican ee aan ku siin karno kiiskaaga ayaa ah, markii aad wax daabaceyso, weydii waxa ay noqon laheyd ikhtiyaarka ugu fiican ee kuxiran nooca mashruuca aad gacanta ku hayso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Noocyada waraaqda daabacaada
Sida looga saaro ilaalinta PDF